चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने डा. केसीको चेतावनी - Gokarna News from Nepal
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौं– डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
विहीवार(आज) पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
यदी आफ्ना मागहरु पूरा नगरिएका कडा आन्दोनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने डा. केसीले सरकारलाई चेनावनी दिएका छन् ।